Fitantanana ny “ Iles Eparses” Hatsangana tsy ho ela ilay vaomiera manokana
Nitondra fanampim-panazavana taorian’ny fanambaran’ny filoha Frantsay Emmanuel Macron nataony tany amin’ny nosy Glorieuses ny filoha Malagasy Andry Rajoelina tamin’ny alalan’ny tambajotra sosialy tweeter sy facebook omaly .
Hoy indrindra izy : “ mampiaiky an’izao tontolo izao ny fananan’i Madagasikara harena voajanahary . Ny fanajana ny fiandrianam-pirenena sy ny fiarovana ny tombontsoantsika dia tsy maintsy takiana amin’ny alalan’ny fifampiresahana. Ampahatsiahiviko fa hajoro alohan'ny 18 novambra izao ny Vaomiera iombonana momba ireo nosy éparses ireo. Vonona ary matoky isika fa hiaro ny hambompom-pirenena”.Hijoro ato anatin’ny 3 herinandro izany ilay vaomiera iombonana handinihan’ny firenena roa tonga dia i Frantsa sy Madagasikara ny aminn’ny fitantanana ny Iles Eparses. Hatreto aloha, raha ny fizotry ny resaka sy ny fanehoan-kevitra dia ny fiaraha-mitantana no mety hitranga, io rahateo no efa voaresaka nandritra ny fitondrana teo aloha…Tsy hisy ny hoe haverina manontolo amin’i Madagasikara ny Nosy manodidina. Tsy maintsy iaraha-mitantana amin’ny Frantsay io. Miankina amin’ny fizotry ny fifampidinihana avokoa anefa izany rehetra izany.